တာချီလိတ်မြို့တွင်း ဂေါက်ကွင်းလမ်းအနီး စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ၊ ယာဉ်မောင်းမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ်မြို့တွင်း ဂေါက်ကွင်းလမ်းအနီး စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိ၊ ယာဉ်မောင်းမှာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
Writen by Web Admin 9:10:00 PM -0Comments
တာချီလိတ်မြို့ ဂေါက်ကွင်းသွားလမ်း နှင့် ခရိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှေ့ထွက်ပေါက် အနီးတွင် လူ(၃)ဦး ပါလာသည့် ကားပေါ်က စိတ်ကြွဆေးပြား (၄၀၀၀၀)အား ဖမ်းဆီးရမိပြီး (၃)ဦးအနက် (၁)ဦးမှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားကြောင်း သိရသည်။
မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၃၀) တာချီလိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့သည် ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလ (၅)ရက်နေ့ နေ့လည်(၂း၄၅)နာရီ ၀န်းကျင်အချိန်က ဂေါက်ကွင်းသွားလမ်း နှင့် ခရိုင်ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး ရှေ့ထွက်ပေါက် အနီးတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်းအရ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် သတင်းရရှိထားသည့် Mark-ll အမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ် ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပူးပေါင်းအဖွဲ့က မော်တော်ယာဉ်အား ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ပေါ်တွင် လီဆီးမှ လိုက်ပါ မောင်းနှင်ပြီး ယာဉ်နောက်ခန်းတွင် ဂျော်နီ နှင့် အားဆော်တို့မှာ လိုက်ပါလာခဲ့သည့်ကို တွေ့ရှိရပြီး ယာဉ်ပေါ်မှ (၃)ဦးလုံး ခုန်ချထွက်ပြေးရာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ၀ိုင်းဝန်း ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ယာဉ်နောက်ခန်းတွင် လိုက်ပါလာသူ ဂျော်နီ နှင့် အားဆော်တို့ကိုသာ ဖမ်းဆီးရမိပြီး ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ လီဆီးမှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ မော်တော်ယာဉ်အတွင်း ရှာဖွေရာ ယာဉ်နောက်ခန်းမှ အနောက်ရောင် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ဖြင့် ထုတ်ထားသည့် Wy စာတမ်းပါ လိမ္မော်ရောင် စိတ်ကြွဆေးပြား (၂၀၀၀)စီပါသည့် အထုတ်(၂၀)အား တွေ့ရှိရာ စိတ်ကြွဆေးပြား စုစုပေါင်းမှာ (၄၀၀၀၀)ဖြစ်ပြီး အလေးချိန်မှာ (၄)ကီလိုဝန်းကျင်ရှိကြောင်း သိရသည်.
စိတ်ကြွဆေးပြားများ ဖမ်းဆီးရမိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးရမိထားသူ (၂)ဦး နှင့် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် နေသူ (၁)ဦး စုစုပေါင်း (၃)ဦးအား တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းတွင် မယ(ပ)၃၅/၂၀၁၈၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၉(က)/၂၁အရ အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားပြီး ထွက်ပြေးသွားသူအား ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
တာခြီလိတျမွို့ ဂေါကျကှငျးသှားလမျး နှငျ့ ခရိုငျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးရှထှေ့ကျပေါကျ အနီးတှငျ လူ(၃)ဦး ပါလာသညျ့ ကားပျေါက စိတျကွှဆေးပွား (၄၀၀၀၀)အား ဖမျးဆီးရမိပွီး (၃)ဦးအနကျ (၁)ဦးမှာ ထှကျပွေး လှတျမွောကျသှားကွောငျး သိရသညျ။
မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၃၀) တာခြီလိတျမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ သကျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးအဖှဲ့တို့သညျ ၂၀၁၈ခုနှဈ မလေ (၅)ရကျနေ့ နလေ့ညျ(၂း၄၅)နာရီ ဝနျးကငျြအခြိနျက ဂေါကျကှငျးသှားလမျး နှငျ့ ခရိုငျပွညျသူ့ ဆေးရုံကွီး ရှထှေ့ကျပေါကျ အနီးတှငျ မူးယဈဆေးဝါးသတငျးအရ စောငျ့ဆိုငျးနစေဉျ သတငျးရရှိထားသညျ့ Mark-ll အမြိုးအစား မျောတျောယာဉျ ရောကျရှိလာကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ပူးပေါငျးအဖှဲ့က မျောတျောယာဉျအား ရပျတနျ့စဈဆေးရာ ယာဉျပျေါတှငျ လီဆီးမှ လိုကျပါ မောငျးနှငျပွီး ယာဉျနောကျခနျးတှငျ ဂြျောနီ နှငျ့ အားဆျောတို့မှာ လိုကျပါလာခဲ့သညျ့ကို တှရှေိ့ရပွီး ယာဉျပျေါမှ (၃)ဦးလုံး ခုနျခထြှကျပွေးရာ ရဲတပျဖှဲ့က ဝိုငျးဝနျး ဖမျးဆီးခဲ့ရာ ယာဉျနောကျခနျးတှငျ လိုကျပါလာသူ ဂြျောနီ နှငျ့ အားဆျောတို့ကိုသာ ဖမျးဆီးရမိပွီး ယာဉျမောငျးဖွဈသူ လီဆီးမှာ ထှကျပွေး လှတျမွောကျသှားကွောငျး သိရသညျ။
ဆကျလကျ၍ မျောတျောယာဉျအတှငျး ရှာဖှရော ယာဉျနောကျခနျးမှ အနောကျရောငျ ကွှပျကွှပျအိတျဖွငျ့ ထုတျထားသညျ့ Wy စာတမျးပါ လိမ်မျောရောငျ စိတျကွှဆေးပွား (၂၀၀၀)စီပါသညျ့ အထုတျ(၂၀)အား တှရှေိ့ရာ စိတျကွှဆေးပွား စုစုပေါငျးမှာ (၄၀၀၀၀)ဖွဈပွီး အလေးခြိနျမှာ (၄)ကီလိုဝနျးကငျြရှိကွောငျး သိရသညျ.
စိတျကွှဆေးပွားမြား ဖမျးဆီးရမိမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဖမျးဆီးရမိထားသူ (၂)ဦး နှငျ့ ထှကျပွေး လှတျမွောကျ နသေူ (၁)ဦး စုစုပေါငျး (၃)ဦးအား တာခြီလိတျမွို့မရဲစခနျးတှငျ မယ(ပ)၃၅/၂၀၁၈၊ မူး/စိတျပုဒျမ ၁၉(က)/၂၁အရ အမှုဖှငျ့အရေးယူ ဆောငျရှကျထားပွီး ထှကျပွေးသှားသူအား ဖမျးဆီးရမိရေးအတှကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျနလေကျြရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။